BitCrystals စျေး - အွန်လိုင်း BCY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitCrystals (BCY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitCrystals (BCY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitCrystals ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
BCY – BitCrystals
Market ကဦးထုပ်: $856 310.00
volume_24h_usd: $20 504.50
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitCrystals တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitCrystals များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitCrystalsBCY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0372BitCrystalsBCY သို့ ယူရိုEUR€0.0314BitCrystalsBCY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0284BitCrystalsBCY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0339BitCrystalsBCY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.331BitCrystalsBCY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.234BitCrystalsBCY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.819BitCrystalsBCY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.138BitCrystalsBCY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0492BitCrystalsBCY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0518BitCrystalsBCY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.83BitCrystalsBCY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.288BitCrystalsBCY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.202BitCrystalsBCY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.78BitCrystalsBCY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.6.26BitCrystalsBCY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.051BitCrystalsBCY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0566BitCrystalsBCY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.15BitCrystalsBCY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.258BitCrystalsBCY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.97BitCrystalsBCY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩44.04BitCrystalsBCY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦14.3BitCrystalsBCY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.73BitCrystalsBCY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.02
BitCrystalsBCY သို့ BitcoinBTC0.000003 BitCrystalsBCY သို့ EthereumETH0.0001 BitCrystalsBCY သို့ LitecoinLTC0.000684 BitCrystalsBCY သို့ DigitalCashDASH0.00041 BitCrystalsBCY သို့ MoneroXMR0.000418 BitCrystalsBCY သို့ NxtNXT2.9 BitCrystalsBCY သို့ Ethereum ClassicETC0.00548 BitCrystalsBCY သို့ DogecoinDOGE10.73 BitCrystalsBCY သို့ ZCashZEC0.000451 BitCrystalsBCY သို့ BitsharesBTS1.15 BitCrystalsBCY သို့ DigiByteDGB1.19 BitCrystalsBCY သို့ RippleXRP0.132 BitCrystalsBCY သို့ BitcoinDarkBTCD0.00128 BitCrystalsBCY သို့ PeerCoinPPC0.123 BitCrystalsBCY သို့ CraigsCoinCRAIG16.95 BitCrystalsBCY သို့ BitstakeXBS1.59 BitCrystalsBCY သို့ PayCoinXPY0.649 BitCrystalsBCY သို့ ProsperCoinPRC4.67 BitCrystalsBCY သို့ YbCoinYBC0.00002 BitCrystalsBCY သို့ DarkKushDANK11.94 BitCrystalsBCY သို့ GiveCoinGIVE80.56 BitCrystalsBCY သို့ KoboCoinKOBO8.47 BitCrystalsBCY သို့ DarkTokenDT0.0343 BitCrystalsBCY သို့ CETUS CoinCETI107.43
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 11:05:02 +0000.